Muuri News Network » DAAWO: Gaas oo si toos ah kaga hadlay Sida loogu qanciyay Nidaamka 4.5..
DAAWO: Gaas oo si toos ah kaga hadlay Sida loogu qanciyay Nidaamka 4.5..
C/wali Gaas, ayaa kasoo muuqday Telefishanka Puntland, isaga oo shacabka ku hoos nool deegaanada maamulka la wadaagay fikrada ku aadan aqbalida nidaamka 4.5.
Madaxweynaha maamulka Puntland C/wali Gaas, ayaa si faahfaahsan uga hadlay sababta uu u qaatay nidaamka 4.5, waxa uuna tilmaamay in aqbalida nidaamkaasi uu yahay mid markii danbe qasab ku noqday Puntland.
Gaas oo shacabka Puntland la wadaagaayay aragtidooda ayaa waxa uu sheegay in aqbalida 4.5 uu wado wacan u furaayo Somalia oo idil, waxa uuna tilmaamay in muhiimadu ay tahay in labada dhan ay isla fahmaan qodobo ay maslaxad ku jirto.
Waxa uu tilmaamay in isaga iyo Xubnihii ku wehlinaayay wada hadalka ay is tuseen in sadex qodob mid kood inay qaataan, sadex daas qodob oo kala ah:-
In Punland ay ka go’do Soomaaliya in teeda kale,
In afarta sano ee doorashada lagu salaynayo 4.5-ka ay Puntland banaan istaagto oo aysan waxba ku darsan,
In Puntland DFS la gasho heshiis bur-burin kara diidmada 4.5ka.
C/wali Gaas waxa uu sheegay in isaga iyo xubnaha ku wehlinaayay wada hadalka ay juhdi badan ku bixiyeen sida ay Shacabka Puntland ugu soo qaadi lahaayen qodobo u cuntama, waxa uuna cadeeyay in Puntland ay ku qasbaneyd inay qaadato 4.5, kadib cadaadin dhinacyo dhowr ah laga soo saaray.